Seminera FJKM Ambatobevanja – FJKM
Trano tamin’ny 1901 no narenina tanteraka
Notokanana ary natolotra ny FJKM sy ny toeram-panomanana Mpitandrina ny Sabotsy 27 Aprily 2019 lasa teo ny fanavaozana ny trano « Betlehema » ao amin’ny seminera FJKM Ambatobevanja. Izany asa izany dia tsangambaton’ny faha-40 taonan’ny sampana Vondrona Fototra Laika avy eo amin’ny FJKM Ankadifotsy. Ny teny faneva entin’izy ireo mandritry ny fankalazana dia nalaina avy ao amin’ny Jakoba 2:18b » fa izaho kosa hanefa ny finoako amin’ny asako » .
Natomboka tamin’ny fanompoam-pivavahana ny fotoana izay notarihin’ny Talen’ny Seminera Ramatoa Andriamose Lisiarisoa Veromalala Mpitandrina ary ny Jakoba 2:18b no nakany ny hafatra tamin’izany ary namafisiny tamin’ny teny fanevan’ny SFL hoe: »Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany » Mat.5: 47b.
Nisy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa taorian’izany, izay notarihin’ ny Sojaben’ ny toeram-panomanana Mpitandrina, ny Dr. Ramambason Laurent William Mpitandrina. Anisan’ny nandray fitenenana Ramatoa Ranjakavola, ny filohan’ ny VFL Ankadifotsy nampahatsiahy ny dingam-piainan´ny sampana tao anatin´izay 40 taona izay. Nisy ny fiaraha-niala hetaheta taorian’ny nitokanana ny trano « Betlehema » tany am-pamaranana ny fotoana. Tiana ny manamarika fa tamin’ny taona 1901 no nanorenan’ny misionera ity trano « Betlehema »ity ka izao vao nisy fanarenana indray . Tokantrano 3 no afaka misitraka ity trano ity. Tranainy dia tranainy ny foto-drafitrasa ao Ambatobevanja. Miisa 75 no mpianatra Mpitandrina monina eny ankehitriny misy ny vao manomboka, fa misy koa ireo mamaramparana fianarana.